Global Voices teny Malagasy » Mamaly ny Drafitra Hanitarana ny Fampianarana Ortodoksia Amin’ny Sekoly Rosiana ny Mpampianatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Mamaly ny Drafitra Hanitarana ny Fampianarana Ortodoksia Amin'ny Sekoly Rosiana ny Mpampianatra
Voadika ny 17 Janoary 2017 5:10 GMT 1	 · Mpanoratra Ben Cohen Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Rosia, Fanabeazana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika, Akon'ny RuNet
Loharano: Akademia Teolojika Saint Petersburg, Flickr
Ankoatra ny fitadidiana ny renivohitra manerantany sy ny daty lehibe mana-tantara, tian'ireo mpanapa-kevitra ara-politika ao Rosia ny mpianatra hahafantatra ireo karazana feon-dakolosim-piangonana sy hijery ny alimanaka Ortodoksa Rosiana ihany koa. Tamin'ny 29 Novambra, nitatitra  ny gazety Kommersant fa efa misy ny drafi-pampianarana dinihan'ny Minisiteran'ny Fanabeazana izay mety hampitombo betsaka ny ora fianarana ny Ortodoksia Rosiana ho an'ny mpianatra eny amin'ny garabola ka hatramin'ny dingana faha iraika ambin'ny folo. Nanoratra ny Kommersant, fa niomana hifidy ny fepetra tsy mila adihevitra sy fifanakalozan-kevitra ofisialy ny mpikambana ao amin'ny minisitera.
Na dia nanamafy aza ireo tompon'andraikitry ny fanabeazana fa tsy terena ny fampianarana eny amin'ny ambaratongam-panjakana, mbola niteraka fanehoan-kevitra mahaliana teo amin'ireo mpampianatra ny rafitra ary niteraka fanontaniana sasantsasany amin'ny fifandraisana akaiky eo amin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana sy ny governemanta. Mazava ho azy fa natao hisolo manontolo ny fianaram-pivavahana efa misy ny tolo-kevitra, mahatonga ireo ray aman-dreny tsy afaka manaramaso ny fampianarana ara-pivavahana ho an'ny zanak'izy ireo. Ny fianarana ny fivavahana eny amin'ny sekolim-panjakana amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fandaharam-pianarana “Fototra fiorenan'ny Kolontsaina Ara-pivavahana sy ny Etika Laika” (ORKSE ), izay ampianarina ny mpianatra ao amin'ny taona fahefatra eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra. Omena safidy amin'ny iray amin'ireo fandaharana marobe ny ray aman-dreny, mba hameno ny 34 oran'ny programa nosafidianana, anisan'izany ny etika laika, ny kolontsaina ara-pivavahana manerantany, ny Ortodoksia Rosiana, ny Jodaisma, ny Islamo sy ny Bodisma.
Ahitana fitomboan'ora laniana amin'ny fianarana ara-pivavahana ny tolo-kevitra – ahitana 350 ora isan-taona, na lesona roa isan-kerinandro ho an'ny dingana faha-5 ka hatramin'ny faha-9. Anisan'ireo lohahevitra natolotra ny “Fahatakarana Ortodoksa Kristiana ny Dikan'ny Fiainan-janak'olombelona”, sy ny “Fanazavana diso amin'ny fandikan'ny Literatioran'ny Sekta mampidi-doza izay voalazan'ny Soratra Masina.”
Hatramin'ny nirodanan'ny Firaisana Sovietika, 25 taona lasa izay, nitolona i Rosia hampifandanja ny fampivelarana ny kolontsaina ara-pivavahana—endrika nanandanja teo amin'ny fiainan'i Rosia Imperialy talohan'ny nandraràna ny fivavahana tao amin'ny Firaisamben'ny Repoblika Sosialista Sovietika—indray sy ny fihazonana ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana. Tamin'ny taona 2007, nandefa taratasy  ho an'ny Filoha Vladimir Putin ireo mpahay siansa folo malaza niampanga ny fitombon'ny ara-pivavahana eny amin'ny sekoly Rosiana. Fiitaran'ny adihevitra momba ny toeran'ny fivavahana eo amin'ny fampianarana ara-panjakana ny resabe amin'izao fotoana izao ary tsy vao voalohany tamin'ity taona ity no natolotra ho an'ny minisiteran'ny fanabeazana ny rafitra tahaka izany. Tamin'ny volana Jona, nitaky ny handinihana indray ny lesona hafa momba ny Ortodoksia Rosiana, ny filohan'ny Akademia Rosiana momba ny Fanabeazana, Lyudmila Verbitskaya, izay efa nanolo-kevitra  fa tokony ny Ortodoksia Rosiana no ianaran'ny mpianatra fa tsy ny tantara noforonin-dry Leo Tolstoy na Feodor Dostoyevsky, na dia nampirimina aza izany taty aoriana.
Ny Valintenin'ny Mpampianatra
Tsy dia tena faly amin'ny tolo-kevitra vao haingana indrindra ireo mpampianatra sy mpanabe. Olga Sapukhina, mpampianatra matematika sy programan'asa ao Moskoa, nanoratra  tao amin'ny pejy Facebook-ny hoe: “Momba ny inona izany? Mifanaraka amin'ny ve izany aloha? Tsy dia ampy ny fotoana ho an'ny siansa, mitohy ny adihevitra mikasika ny anjara toeran'ny lohahevitra tahaka ny astronomia sy ny sary teknika izay noesorina tao anatin'ny fandaharam-pianarana ary dia hampiditra ny Ortodoksia Rosiana isika ankehitriny? Tsy misy zavatra hafa hampianarina any an-tsekoly ve? Mahafehy tsara ny taranja hafa ve ny mpianatra?
Mandritra izany, nanohana  ny hevitry ny taleny, Irina Bogantseva, izay nanohitra  ny drafitra ihany koa tamin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny dinika fifanakalozan-kevitra “Ny Fanontaniana” ny lisea Eoropeana ao Moskoa.
Azo antoka fa tsy irery i Bogantseva sy Sapukhina: nahazo sonia maherin'ny 100.000 ny fanangonan-tsonia nipoitra taorian'ny vaovao momba ny drafi-pampianarana. Mitondra ny lohateny hoe “Rarao ny fampianarana ny ‘fototry ny Kolontsaina Ortodoksa Rosiana’ sy ny taranja hafa mametraka ny fomba fijery ara-pivavahana eo amin'ny ankizy ao amin'ny Sekoly Rosiana” ny fanangonan-tsonia, miantso ny Filoha Vladimir Putin mba hamaha mivantana ny olana.
Raha ny marina, dia misalasala amin'ny fanabeazana ara-pivavahana baikon'ny avy any ambony ireo tompon'andrakitry ny fampianarana. Tamin'ny fanehoana hevitra amin'ny fanitarana mihoatra ny fepetran'ny ORKSE ny fampianarana ara-pivavahana tsy maintsy ianarana, dia nanipika  i Vyacheslav Nikonov, filohan'ny Komitim-pampianarana ao amin'ny Duma-m-panjakana fa tsy tokony raisin'ny ambaratonga federaly ny fanapahan-kevitra momba ny fanamafisana ny fampianarana ara-pivavahana: “Mihevitra aho fa na ahoana na ahoana, ny safidy hianatra na tsy hianatra ny kolontsain'ny Ortodoksia Rosiana dia tokony hiankina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra. “
Taorian'ny niporitsahan'ny drafitra, namoaka fanambarana ny Minisitry ny Fanabeazana Rosiana, Olga Vasilieva, fa tsy an-tery ny fampianarana. “Mba ahafahana mandinika bebe kokoa na mandrisika izany safidy izany, manamafy aho fa tokony hiaraka hiadi-hevitra ireo manam-pahaizana, izany hoe, tsy mety amin'ity ny fifidianana ataon'ny solontena, hoy izy  nanondro ny latsa-bato, tolo-kevitra tamin'ny drafitra ary mbola tsy notontosaina mihitsy.
Toa tsy mankasitraka ny dingana fandinihana indray ny drafi-pampianarana i Inasmuch, sy i Vassilieva, toa tsy tratran'ny tsikerany akory aza ny votoatin'ny drafitra. Tsy mahagaga izany, raha ny tantarany manokana no jerena. Niteraka ahiahy ny fanendrena an'i Vassilieva tao amin'ny Minisiteran'ny Fampianarana tamin'ny fiandohan'ity taona ity raha fantatra fa manana fifandraisana akaiky amin'ny Eglizy Ortodoksa Rosiana izy (ary manana fomba fijery mampiadi-hevitra momba ny lova navelan'i Joseph Stalin). Tamin'ny volana Aogositra, namoaka fanambarana  tao amin'ny tranonkalany mikasika ny fanendrena an'i Vassilieva ny Eglizy Ortodoksa, toy izao no voalaza: “Nomen'ny Tompo talenta lehibe, izay nampiasainao tamim-pahombiazana tamin'ny dingana maro tamin'ny asanao ianao.”
Na izany aza, nalaza teo amin'ireo mpisera media sosialy ny tolo-kevi-pampianarana, nihevitra izy ireo fa zava-dehibe ho amin'ny fiarovana ny kolontsaina Rosiana ny fampianarana ny Ortodoksia Rosiana.
Tsy nahatsikaritra ve ianao fa miha-very ny famantaram-pirenena antsika? Tsy nahatsikaritra izy ireo! Ny fampidirana ny fototry ny Ortodoksia Rosiana any an-tsekoly no mety ho vintana farany.
Voaaron'ny Andininy faha-14  ao amin'ny Lalàmpanorenana Rosiana ny fahalalahana ara-pivavahana. Raha nahita ny fikarohana  2008 nataon'ny Foibem-pikarohana Pew fa mihevitra ny tenany ho Ortodoksa Rosiana ny 72 isanjaton'ny olom-pirenena Rosiana, mampiantrano Miozolomana maromaro ihany  i Rosia: olona efatra ambinifolo tapitrisa, na 10 isanjaton'ny mponina no mihevitra ny tenany fa Miozolomana.
Lahatsary Facebook-n'i Ahmed Makhmetov.
Ao amin'ny faritra Tatarstan ao Rosia, Miozolomana avokoa ny mponina maherin'ny 50 isanjato, mety hametraka olana ny fametrahana ny fianarana tsy maintsy atao izay manohana ny Ortodoksia Rosiana ho fototry ny famantaram-pirenena Rosiana. Sanganehana i Ahmed Makhmetov, miasa ao amin'ny Fitantanana Ara-pivavahana Islamika ao amin'ny Saratov Oblast, atsimo-andrefan'i Rosia raha nandre ny vaovao. Ka nanoratra  tao amin'ny pejy Facebook-ny izy hoe : “Voaràra ho an'ny ankizy ny mitondra voaly satria laika (tsy ara-pivavahana) ny fampianarana misy eto amintsika, saingy ara-dalàna kosa ny mianatra bebe kokoa momba ny Ortodoksia Rosiana?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/17/93782/
 fanangonan-tsonia : https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%
 hoy izy: http://www.interfax.ru/russia/539270
 Andininy faha-14: http://www.constitution.ru/en/10003000-02.htm
 maromaro ihany: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/